Weerar dad lagu dilay oo ka dhacay gobolka Sh/Dhexe | KEYDMEDIA ONLINE
Weerar dad lagu dilay oo ka dhacay gobolka Sh/Dhexe
Kooxda falkan fulisay ayaa la sheegay inay ahaayeen Maleeshiya beeleed, waxayna beegsadeen degaan lagu magacaabo Filla-dheere oo hoostaga degmada Warsheekh ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
MUQDISHO, Soomaaliya - Shabeellaha Dhexe waxaa ka dhacay weerar ay gaysatay kooxo hubaysan kaasoo lagu dilay dad shacab ah, sida ay sheegeen Saraakiisha amniga.
Kooxda falkan fulisay ayaa la sheegay inay ahaayeen Maleeshiya beeleed, waxayna beegsadeen xalay degaan lagu magacaabo Filla-dheere oo hoostaga degmada Warsheekh ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
Ilo wareedyo ayaa ku waramay in weerarka lagu dilay laba nin oo kamid ahaa dadka shacabka ah, kuwaasoo aad looga yaqaanay degaanka, waxaana lagu magacaabi jiray Maxamed Ismaaciil Maxamuud iyo Cabdullahi Maxamed Axmed (Jeego).
Gobolka Shabeellaha Dhexe iyo guud ahaan degaanada maamulka HirShabeelle ayaa waxaa mudooyinkii dambe ku soo noq-noqday colaadaha salka ku haya aanooyinka qabiilka, kuwaas oo lagu dilay dad maati ah oo aan waxba galabsan.